Ukufumana phi iiseli zeMicrostation -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Kuphi ukufumana iiseli ze-Microstation
Kuphi ukufumana iiseli ze-Microstation
Abanye bababiza ngokuba ziiseli, igama iiseli kwaye lilingana neebhloko ze-AutoCAD. Kwithuba elidlulileyo sibonile apho sinokukhuphela khona Iibhloko ze-AutoCAD, kunye nendlela yokuguqula ezi fayile .cel AutoCAD ibhloko.
Ngoku masibone ukusuka kwindawo yokukhuphela iiseli: Kukho iziza ezininzi, apho unokufumana khona izixhobo ezinje:
Phakathi kwezinye ezi zinikezela ngeefayile ezahlukeneyo zebhloko, kodwa eyona ndawo icetyiswayo yokufumana iiseli kukwiphepha elisemthethweni leWindows Systems, kwilayibrari ekhethiweyo yeWindows Library eBentley.
Khetha indawo enomdla kuyo, ulwimi nodidi lwezixhobo ezifunekayo.
Ukunika umbono, ndikhethe intengiso: "Ukwakha", uhlobo loovimba: "iseli" kunye nolwimi "iSpanish" kwaye esi sisiphumo:
izihlalo.cel-Iindidi ezahlukeneyo zezitulo, izitulo nezitulo ezixhotyisiweyo.
Iimoto.cel - imoto (iPakistan)
Izinto zokwakha.cel - iibalustrade, oololiwe, iikholamu, indawo yomlilo, njl.
Iitafile.cel -Iindidi ngeetafile, iitafile zekofu, iidesika, iitafile zobusuku, njl njl.
ifenitshala yegumbi lokulala i-cel-iindidi ezahlukeneyo zeebhedi, isifuba sedrowa, chiffoniers, njl.
ifenitshala yasekhitshini.cel-iikhabhathi eziphakamileyo, ezisezantsi nezingaphezulu, iinyibiba, ii-oveni, Uluhlu lweebhedi, izitya zokuhlambela, imivalo kunye nezitulo, njl.
Ifanitshala yeofisi.cel-iidesika, iikhompyuter, izitulo, ifanitshala kunye neekhabhathi zokufayilisha, njl.
igumbi lokuhlala ifenitshala cel-sofa, izitulo ezixhasayo, izihlalo ezinamavili kunye neefesti zeenyawo, ifenitshala, iitafile zekofu, iibhodi zecala, njl.
ifenitshala ekhethekileyo i-cel-pianos, iitafile zeephuli, iiTV, izithethi, izibane, iishelufu, njl.
I-Plantas.cel -Iindidi ezahlukeneyo zezityalo, imithi, amaziko eentyatyambo kunye neembiza, umdaka, njl.
doorknobs.cel- ezinye iintlobo zeengcango neminyango kunye nezitshixo zefestile
angapo.cel - ii-sofa, izitulo ezihlala iingca, iitafile, iidesika, iishelufu, indawo yokubasa umlilo, isinki, isitya sokuhlamba, ii-oveni, iiefotor, ifanitshala yasekhitshini, iibhedi ezizodwa okanye ezibini, iiradiators, njl.
Ukuhlamba kunye nococeko
igumbi lokuhlambela iikhabhathi.cel-ezahlukeneyo ezahlukeneyo, eziphantsi, iiyunithi eziphambili kunye namashalofu
bathtubs.cel -Iindidi ezahlukeneyo zeebhafu zokuhlambela
baño.cel -inki zangoku kunye neempompo
ii-bidets.cel -Iindidi ezahlukeneyo zeebhawuthi
Ikhabhathi ye-WC.cel - iintlobo ezahlukeneyo zeekhabhathi ze-WC
iishawari.lkz-iindidi ezahlukeneyo nobungakanani beetreyi zokuhlambela nezikhuselo zokuhlambela
izibuko.cel -Iindidi ezahlukeneyo zezipili
I-Instalaciones-Plutaneria.cel - iimpompo / iimpompo zokutswina, igumbi lokuhlambela kunye nemiboniso
lavabos.cel -Iindidi ngeendidi zesinki
radiadores.cel -Iindidi ezahlukeneyo zeradiators kunye neetawuli racks
Iinkqubo zokukhanyisa.cel-Iindidi ezahlukeneyo zodonga, umgangatho kunye nezibane zophahla
umchamo.cel -Iindidi ezahlukeneyo zokuchama
WC.cel -Iindidi ezahlukeneyo ze-WCs
Ifenitshala kunye nezixhobo
izixhobo ze-salon.cel -I-TV, izixhobo ze-hifi, abadlali bevidiyo, izithethi kunye nezixhobo zomzimba
Isixhobo se-appliquescel -Iindidi ezahlukeneyo zezibane / udonga lwesodonga
izihlalo.cel - iitafile kunye nezitulo
iindawo zokucima umlilo.cel-Iindidi ezahlukeneyo zezindawo zokucima umlilo
izixhobo zeofisi.cel - iifowuni, ifaksi, iikhompyuter, abashicileli, izikena, iifotokopi, njl.
izibane zomgangatho.cel-Iindidi ezahlukeneyo zezibane zomgangatho
izibane zetafile.cel-Iindidi ezahlukeneyo zezibane zeetafile
izibane zophahla.cel-Iindidi ezahlukeneyo zezibane zophahla kunye nezibane
Iitafile ze-centro.cel -Iindidi ezahlukeneyo zeetafile zekofu kunye neetafile
ifenitshala yeofisi.cel- Iindidi ezahlukeneyo zefanitshala yeofisi, kubandakanya iikhabhathi, iibhodi zecala, iikhabhathi kunye neetafile zokutyela ezinezitulo
Ifenitshala yeofisi.cel-Iikhompyuter zedesktop, iitafile, izitulo, iishelufu, iifayile zeekhabhathi, njl.
igumbi lokuhlala lefanitshala.celishe - isherifu, ifanitshala, iikhabhathi zeglasi, oonobhala, njl.
repisas.cel - iishelufu kunye neishelufa zeencwadi
abanamakhandlela.cel -Iindidi ezahlukeneyo zabaphethe amakhandlela
tapicería.cel - izitulo iingalo, iisofa, izitulo, njl.
Nangona uninzi lweefayile zifunyanwa ngokukhetha ulwimi lwesiNgesi, izinto ziluncedo kulo naluphi na ulwimi kwaye ugcina ixesha elininzi ekuzobeni ... kungcono nangoku, zonke ziza zisebenza kwiiyunithi ezisebenzayo kwaye ezo zintathu zisebenza kakuhle.
Ukufikelela kulo mthombo, kufuneka ubhalisele kwiNkonzo ye-Khetha, ikhululekile.
Yakha indlela kunye neebhokisi zebanga kwi-AutoCAD
Ngaba ufuna ukufumana i-$ 30 yokuhlola i-Autodesk Topobase?
Sawubona, ndizama ukufumana iiseli kunye nokulandela isiqhagamshelo sakho awuhambi kwiphepha leBentley. Ndiyakuyixabisa ukuba unokudibanisa nale mabhloko kuba andinakuyifumana kwiphepha leBentley.
Ndiyakuyixabisa ukuba unokudibanisa nesayithi apho izibonelelo zeBentley zikhona. Andikwazi ukuzifumana.